9 Nzira dzekutenderedza Yako B2B Zviitiko neChiitiko Tech | Martech Zone
9 Nzira dzekutenderedza Yako B2B Zviitiko neChiitiko Tech
Chipiri, Gunyana 26, 2017 Chipiri, Gunyana 26, 2017 Michael Doane
Nyowani Mune Yako Martech Stack: Chiitiko Management Software
Varongi vezviitiko nevatengesi vane zvakawanda zvekujusa. Kutsvaga makuru maspika, kurongedza zvinotyisa zvemukati, kutengesa kutsigira, uye kuendesa yakasarudzika vanopinda chiitiko chinosanganisira chidiki muzana yezuva nezuva-yezuva zviitiko. Zvakadaro, izvi zviitiko zvinotora yakawanda nguva.
Ndosaka varongi vezviitiko zveB2B vari kuwedzera kuwedzera Chiitiko Tech kumateki avo eMartech. PaCadmiumCD, isu tapedza anopfuura makore gumi nemanomwe tichigadzira uye kupolisha mhinduro dzakanakisa dzesoftware yezviitiko zvakasiyana zvevarongi vezviitiko.
Nhasi, isu tichaputsa mashoma eanogadzira marongero anogona kurongeka neChiitiko Tech.
1. Unganidza & Ongorora Kutumira Kwemusangano
Imwe yedambudziko hombe B2B varongi vezviitiko vanotarisana nayo kurongedza zvirimo. Tinoda vatauri vanokurudzira kuita, kudzidzisa, uye kunakidza vatinopinda. Izvo zvakakosha kuti mutauri wega wega mutauri aenzane nebasa redu.
Kuisa kunze kwekufona kwemapepa inzira yakanaka yekuona yakanaka yemukati yechiitiko chako. Kugadzirisa zvese izvi kuendesa, zvisinei, hazvisi nyore.
Ndipo panouya Chiitiko Tech. Kuwedzera kutumira uye kuongorora software, senge Abstract Scorecard, kune yako stack yeMartech inzira yakanaka yekugadzirisa zvese zvinotumirwa zvaunowana.
Iwe unogona zvakare kudhonza pamwe komiti yehunyanzvi indasitiri iyo inogona kuongorora kutumira uye kukurudzira zvemukati. Hechino chinyorwa pane mashandisiro anoita mumwe mushandisi mhinduro yake kusvika ku100%
2. Manage Avo Vatauri vePasky
Ukangosarudza zvemukati wechiitiko chako, dambudziko rinotevera ndere maneja mutauri. Vatauri vane mukurumbira wakaoma kubata. Kuchengeta kuendesa kuburikidza neemail uye maspredishiti imwe nzira yekuzviita, asi haina kunaka.
Chinhu ndechekuti, maspika akabatikana. Ivo vanowanzo kuve nyanzvi mundima yavo yavakapihwa, uye vane huwandu hwakawanda hwebasa husinei nechako chiitiko. Kazhinji, ivo havasi kutobhadharwa kuti vataure pachiitiko chako.
Chiitiko Tech senge Musangano Mucheki inogona kubatsira iwe kuteedzera zvinounzwa uye uteedzere nevatauri vako zvinobudirira. Vatauri vanozozvikoshesa, nekuti vanowana runyorwa runyowani rwekuti ivo (kana vabatsiri vavo) vapedze chidimbu.
3. Ronga & Ronga Zvikamu
Spreadsheets inogona zvakare kubatsira kune ronga uye ronga zvikamu zvako, asi zvakare, haina kunaka. Chiitiko Tech inokutendera iwe kuronga uye kuvaka chirongwa chakatenderedza zvemukati zvaunosarudza panguva yako yekuongorora maitiro. Iwe unogona kugovera maspika kumakamuri ekuratidzira uye maneja ruzivo kuburikidza nechinoitika chemukati manejimendi sisitimu.
Chikamu chakanakisa ndechekuti ino inogadziridza zvemukati mune yako yechiitiko webhusaiti uye chiitiko chiitiko, kuti vako varipo vagare vaine mukana kune zvazvazvino zvemukati uye chirongwa.
4. Tengesa Booth Space & Sponsorship
Kune akawanda eB2B zviitiko, mari yemari ndeimwe yezvakakosha mamaki ekubudirira. Izvi zvinowanzo sanganisira kumhanyisa show yekutengesa kana kutengesa mikana yekutsigira. Izvi zvinogona kuve zvirinyore mabhana kushambadzira pane yako yechiitiko webhusaiti, musangano unotsigirwa, kana Graphics pane yako shuttle bhazi. Dhijitari kana kwete - vanoronga musangano vanoda kuwedzera mari yavo nezvose zviwanikwa zvavanazvo.
Dambudziko nderekuti izvi zvinowedzera kumanikidza iwe neboka rako rekutengesa. Chiitiko Tech inoderedza iro kumanikidza. Jackie Stasch, Senior Manager weCorporate Relations, semuenzaniso, anoshandisa Expo Harvester ku kuzadzisa expo kutengesa kubudirira.
Varatidziri vanozvikoshesa nekuti vanogona kutenga nzvimbo yemadumba uye zvinhu zvekutsigira, vozoendesa zvinotsigira varongi zvezvinhu zvavanoda kubva kwavari, zvese munzvimbo imwechete. Kune vanoronga, ino inzvimbo yakakwana yekutevera zvinounzwa uye chengeta tabo pane iwo mikana yavakatengesa.
5. Manage Kutaurirana Pamberi, Pakati, & Mushure mechiitiko
Kunze kwekutevera nevatauri nevaratidziri nezvekuti ndeapi mabasa anokodzera, zvakakosha kuti uve nenzira yakatwasuka yekusvikira vanopinda. Chiitiko Tech inouya neakavakirwa-mukati maturusi ekutaurisa senge email uye mu-app kusundira notices. Iwe unogona zvikamu zvezvikamu zvinoenderana nebasa rakapedzwa uye kutumira mameseji nema pre-akavaka emaema matemplate.
Kune zvakare zvishandiso zvakaita chiitikoScribe Kuwedzera iyo inobvumira vanoronga kuti vataurirane nevashandi pamwe nevamwe vanobatana panzvimbo, vanopa vatauri mukana wekushandisa zvakagadziriswa zvekutumira zvirimo miniti yekupedzisira, uye kutumira mameseji kune vanopinda kana hurongwa hwachinja.
6. Shingairira Vapindi MuZviitiko Zvese
Kubatanidzwa izita hombe revarongi vezviitiko mazuva ano. Ichowo chimwe chinhu vatengesi vanoshuvira. Kutyaira zviito zvinoteedzana zvinoratidza kuti zvirongwa zvako zviri kushanda. Kukurukurirana nezvako zvemukati uye vanobatika zvinoratidza ROI kune vekunze nevokunze vanobatika.
Hedzino dzimwe nzira shomashoma dzekuwedzera Chiitiko Teki kune yako Martech stack inogona kubatsira kupinza vanopinda:
Dhiraivha yekutengesa show booth traffic kuburikidza mutsvaki wekuvhima.
Wedzera kugamuchirwa kweapp ne yakawanda-chiteshi Chiitiko Tech kushambadzira nzira.
Goverana ruzivo rwemusangano uye kutyaira zviito chaizvo ne digital signage.
Tora chaiyo-nguva mhedzisiro uye kudyidzana ne chirongwa chevateereri chekupindura.
7. Goverana Zvemukati neVapindi
Vatengesi vanoziva kukosha kwezviri mukati. Vatengesi vanoshandisa zviitiko zveB2B sechikamu chemazano avo vanoziva kuti zvakawanda zvemukati zvinoitika mune chaiyo-nguva pazviitiko. Kuve neyako nzira yekutora nekuparadzira izvo zvemukati kune vanoenda uye nevasiri-vanopinda zvakafanana zvakakosha.
Kuwedzera Chiitiko Tekinoroji seConference Proceedings kuchiitiko chako, wozogovana mavhidhiyo ane akawiriraniswa odhiyo nemasiraidhi ine database yako inzira yakanaka yekuita izvi. Kuve neyakagovaniswa chiteshi sechiitikoChinyora Mawebhusaiti nemaAppu zvakare zvakakosha.
Vazhinji vanenge varipo vanenge vatotora pasi app, saka zvese zvaunofanirwa kuita kutumira push info kana email uye voila!, Vanyori vako vanowana mukana wekukurumidza kune zvese zvemusangano wako. Zvakafanana nekutora zvikamu zvako zvemusangano nekuzvidzorera semakumi kana kunyange mazana emawebhinari!
8. Unganidza & Ongorora Mhedzisiro
Zviitiko zvakanakisa zveB2B zviitiko zvinotungamirwa nedata. Kuwedzera Chiitiko Tech kune yako Martech stack inogona kukubatsira iwe kuunza nyowani nzwisiso kune yako yekuzivisa. Kutsvaga kurodha pasi maapplication, zvemukati kurodha pasi, huwandu hwevanhu, uye zvimwe zviri nyore kuburikidza nematurusi akaita senge myCadmium, semuyenzaniso.
Kuunganidza data rehunhu uye huwandu kubva kune vanopinda kunoitwa zvakareruka nemisangano yekuongorora yemusangano senge Ongororo Magnet. Varongi vezviitiko nevatengesi vanogona kushandisa iyi data kugadzira zvigadzirwa zvitsva, kugadzirisa ruzivo rwevanoenda, kana kuona zvinodiwa zvemukati zvezviitiko zvavo zvemangwana.
9. Sarudza Vagashiri Vemubairo
Mapurogiramu emubairo zvakare chikamu chikuru chezviitiko zveB2B. Kuziva nekuziva vatungamiriri veindasitiri, semuenzaniso, inzira huru yekuve mutungamiri wekufunga uye kumisikidza kutendeseka kutenderedza chiitiko chako cheB2B. Dambudziko iri kugadzirisa zvese zvakatumirwa uye kusarudza vanhu chaivo.
Chiitiko Tech, senge maAward Scorecard, kuwedzera kukuru kune yako Martech stack. Iyo inobvumira vanoronga uye vatengesi ku gadzirisa kutumira, ipai vatongi kuti vaongorore mapoka uye vasarudze vanogamuchira zvichibva pamubatanidzwa.
Semurongi wechiitiko kana mushambadzi, iwe unotova nezvakawanda zvekushushikana nazvo. Kuwedzera Chiitiko Tech kune yako Martech stack inzira yakanaka yekuunganidza, kubata, uye kugovana zvemukati nevose vane chekuita navo.
Chiitiko Tech inounza zviitiko zvako zveB2B pamwechete, kugadzirisa zviitiko zvako zvekuronga zviitiko uye kuchengetedza yako nguva nemari nemari.
Tora Quote Yako Inotevera Chiitiko
Tags: vateereri mhinduro systemmanejimendi manejimendiAwardyekutengesa matumbacadmiumcdmibairo yemusanganomhinduro yemusanganomukohwi wemusanganowongororo yemusanganohurukuro dzemusanganodigital signagemibayiro yechiitikoChiitiko manejimendichiitiko manejimendi softwareEvents kuwedzeragadzirisa zviitikokuronga zvikamuscavenger kuvhimakuronga musanganokuronga musanganomutauri manejimendimutauri scorecardmagineti ekuongororasyncrhonize masiraidhi
Michael Doane munyori, mushambadzi, uye mugadziri webhu akawira murudo neindasitiri yezviitiko. At CadmiumCD anodzidzisa vanoronga zviitiko nezve mabhenefiti eChiitiko Tech. Tora kopi yake yepachena Kufambira Mberi MuChiitiko Tech, kuti udzidze kuti Chiitiko Tech chinogona sei kugadzirisa ako B2B Zviitiko.